नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना, पारिवारिक सम्बन्ध र मिल्दो जुल्दो शेयर रेसियोका कारण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जरको तयारी तिब्र ? - Aathikbazarnews.com नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना, पारिवारिक सम्बन्ध र मिल्दो जुल्दो शेयर रेसियोका कारण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जरको तयारी तिब्र ? -
phrases for creative writing creative writing poem by gervase phinn royal bank of scotland will writing service creative writing asthma primary homework help vikings ks2 homework help high school students co to znaczy do your homework excited child creative writing show my homework parent help dbq thesis maker creative writing quaideazam doing homework meme best essay writer in the world dream creative writing university of pennsylvania creative writing mfa creative writing peer feedback form what do your homework software for creative writing different modes of creative writing order fulfillment case study application letter for money withdrawal editing college essay cost rabbit proof fence creative writing finish my essay for me cover letter helper help me with my science homework please picture story creative writing the kite runner creative writing business plan writer australia price proposal cover letter
नेपालका पूराना सबल एवं सक्षम बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेड बीच मर्जर हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । भनिन्छ हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबीच मर्जर गर्नका लागि डिडिएको काम तिव्र गतिमा शुरु भएको हिमालयन बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यि दुई ठूला, सक्षम र सबल हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच यहि पौष महिना भित्रै मर्जरको औपचारीक सहमती हुने भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
यि दुवै बैंकले सहमति गरेपछि पछाडि फर्कनु नपरोस् भनेर दुवै समूह अहिले सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्व (डीडीए) को मूल्यांकन गराउँदै छैन, कर्मचारी ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? आन्तरिक सफ्टवेयर कुन प्रयोग गर्ने ? आदि विषयको छलफलमा पनि उच्चस्तरमा भएको स्रोतको दाबी छ ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले डीडीए गर्न लगाएपछि राष्ट्र बैंक पनि उत्साहित भएको देखिन्छ । उसले मर्जर सफल बनाउन आफूले सक्ने सहयोग गर्ने र ब्यवहारिक कठिनाइहरु आए त्यसलाई फुकाउन मद्दत गर्ने दुवै बैंकका प्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्र बैंकले सन्देश पठाएका राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले मर्जर समिति बनाएका छन्, यसमा बाहिरबाट एक÷एक जना ‘अब्जर्भर’ पनि राखिएको छ । समितिका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले विगतमा मर्जर गराएका अनुभवीहरुसँग पनि छलफल गर्न थालिसकेका भेटिएको छ, भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले डीडीएको काम टीआर उपाध्यायको एकाउन्टिङ फर्मले गरिरहेको छ । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकको सेयर किन्नका लागि बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सिडिसी) ले टीआर उपाध्यायलाई नै डीडीए गर्न लगाएको देखिन्छ ।
दुवै पक्षको सहमतिमा उपाध्यायले डीडीए गरिरहेका छन् । अहिले गरिएको डीडीए प्रारम्भिक हो । डीडीएमा धेरै ठूलो अन्तर आएन भने दुवै बैंक एक बराबर एकको शेयर अनुपातमा मर्ज हुने देखिन्छ, भन्दा फरक पर्दैन ।
औपचारिक सम्झौताअघि नै यी कुरा टुङ्ग्याएर एक चरण ’स्वेच्छिक अवकाश योजना’ मा जाने दुवैबीच भित्रीरुपमा समझदारीजस्तो बनेको हिमालयन बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मोटामोटी भित्री सहमति बनिसकेको देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेलाई वरिष्ठ सीइओमा ’एड्जस्ट’ गरेर जान सकिनेमा दुवै बैंकका सञ्चालक ढुक्क जस्तो देखिन्छन् । तर, पाण्डेलाई अन्याय हुने एक थरिको बुझाई छ, भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकका सम्बद्ध स्रोतहरुका अनुसार, कर्मचारी ब्यवस्थापन के कसरी गर्ने र संस्थालाई कसरी छरितो बनाउने बारेमा छलफल शुरु भएको छ । दुवै पुराना बैंक भएकाले कर्मचारीहरु पनि पुराना छन् । हिमालयन बैंकको तुलनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधा कम छ । यसको पुनरावलोकन के कसरी गर्ने भनेर पनि छलफल भएको छ । औपचारिक सम्झौताअघि नै यी कुरा टुङ्ग्याएर एक चरण ’स्वेच्छिक अवकाश योजना’ मा जाने दुवैबीच भित्रीरुपमा समझदारीजस्तो बनेको हिमालयन बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मोटामोटी भित्री सहमति बनिसकेको देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेलाई वरिष्ठ सीइओमा ’एड्जस्ट’ गरेर जान सकिनेमा दुवै बैंकका सञ्चालक ढुक्क जस्तो देखिन्छन् । तर, पाण्डेलाई अन्याय हुने एक थरिको बुझाई छ, भन्दा फरक पर्दैन ।
यस बारेमा सीइओ पाण्डेले केही पनि प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, उनले मर्जर सफल बनाउन आफूले सहयोग गर्ने बचन सञ्चालक समितिलाई दिएको भनिएको छ । सोझै सञ्चालक समितिलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरी सम्मानजनक ’पोर्टफोलियो’ दिए मात्र सीइओ पाण्डे बैंकमा अडिन सक्ने प्रस्टै देखिन्छ, भन्दा फरक पर्दैन ।हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर भएमा देशकै सबैभन्दा ठूलो वासलात भएको वाणिज्य बैंक बन्ने निश्चित देखिन्छ । यसपछि अरु बैंकलाई पनि एग्रेसिभ मर्जरका लागि दबाब पुग्ने प्रस्टै छ नि । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ भन्दा फकर पर्दैन । दुवै बैंकको सञ्चालक समितिलाई खड्किएको विषय पनि यही हो । हिमालयन बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा भन्दा बढी तलब सुविधा छ । यस्तोमा मर्जर भएर जाँदा दुई बैंकको आ(आफ्नो स्केलमै गइयो भने ब्यवहारिक मर्जर त्यहाँ भइसकेको हुँदैन । त्यही भएर कर्मचारी ब्यवस्थापनमा के गर्न सकिन्छ भनेर दुवै बैंकले अहिलेबाटै बिचारविमर्श गरिरहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जानेबित्तिकै ठूलो हुनुपर्ने दबाब अरु बैंकलाई पनि पर्ने निश्चित देखिन्छ नि । नबिल, ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट र एनआइसी एसिया बैंकलाई पहिलो दबाब पर्ने प्रस्टै भन्न सकिन्छ । अन्य बैंकहरु पनि मर्जरमा जाने छन् ।
नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच निकै लामो समयसम्म दुई बैंकमध्ये कसले बढी नाफा कमाउने र लाभांश बाँड्ने प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्दथ्यो । त्यसैले एकले अर्काको वित्तीय विवरण पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति दुवै बैंकमा थियो । नबिलले जितेका बेला इन्भेष्टमेन्टको बोर्डले प्रमुख कार्यकारीलाई सोध्ने र इन्भेष्टमेन्टले जितेका बेला नबिलको सञ्चालक समितिले सीइओको स्पष्टीकरण नै सोध्नेसम्मको काम भएको चर्चा बजारमा आउने गरेका उदाहरण हामीसंग छन् ।
भनिन्छ, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भए भने अरु बैंकलाई पनि यसले तान्ने छ । मर्जरको लहर नै चलेर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या आधाउधिमा आउने देखिन्छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ भन्दा फकर पर्दैन ।
दुवै बैंकको सञ्चालक समितिलाई खड्किएको विषय पनि यही हो । हिमालयन बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा भन्दा बढी तलब सुविधा छ । यस्तोमा मर्जर भएर जाँदा दुई बैंकको आ(आफ्नो स्केलमै गइयो भने ब्यवहारिक मर्जर त्यहाँ भइसकेको हुँदैन । त्यही भएर कर्मचारी ब्यवस्थापनमा के गर्न सकिन्छ भनेर दुवै बैंकले अहिलेबाटै बिचारविमर्श गरिरहेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
यो चुनौती हो भने अवसर अनुभवी कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउने हो भन्दा फरक पर्दैन होला ।गत असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कुल ऋण एक खर्ब ४४ अर्ब र हिमालयन बैंकको एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक खर्ब ८४ अर्ब र हिमालयनको एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले ५० अर्बभन्दा बढी पुँजी कोष भएको बैंक आवश्यक छ त ? यसले ब्यापार त गर्ला तर पुँजी वृद्धि अनुसार प्रतिफल दिन सक्छ ? मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो तर भद्दा हुने मर्जर कत्तिको आवश्यक छ त, गर्भनर साब ? हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर संस्थासँगै पारिवारिक ब्यवस्थापन पनि भएको भन्न सकिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेका साला हुन् । उनका ससुरा हिमालयन शम्शेर राणा बैंकमा प्रमुख सल्लाहकार अहिले पनि छन् । मर्जरपछि भिनाजु अध्यक्ष र साला प्रमुख कार्यकारी भनेको त पारिवारिक ब्यवस्थापन जस्तो हो नि होइन र ?
बैंकिङ क्षेत्रका दुई पुराना र ठूला बैंक मर्ज हुँदा प्रणालीभित्रका अन्य बैंक निकै साना देखिनेछन् । अर्थात उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुनेछ । र, ब्यापार गर्न नसकेर उनीहरु कमजोर देखिने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर त्यही बेला ती संस्थाहरु पनि मर्जरमा गए भने प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने छ नि ।
मर्जरपछिको हिमालयन–नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई नै पछि पर्न सक्छ । त्यो भनेको दक्ष र अनुभवी कर्मचारी । सवा तीन खर्बको निक्षेप र साढे २ खर्बको ऋण ब्यवस्थापन गर्न सानोतिनो अनुभवबाट सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि बैंकले अन्य संस्थाहरुबाट राम्रा कर्मचारी छान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी कर्मचारी पनि झिकाउनुपर्ने हुन सक्ने देखिन्छ, भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले पनि यी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी र विभागीय प्रमुखका बीचमा कर्मचारी अभाव छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सिइओपछि नायब महाप्रबन्धक छन् । यी दुई पदको बीचमा दुई र चार जना अनुभवी बैंकर अटाउने ठाउँ छन् । हिमालयन बैंकमा तीन जना महाप्रबन्धकहरु राखिएका छन् । त्यहाँ पनि बीचको पदहरुमा कर्मचारी अभावै छ । मर्जरपछि पनि यो खालीपन अझ बढ्छ । यो चुनौती हो भने अवसर अनुभवी कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउने हो भन्दा फरक पर्दैन होला ।
गत असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कुल ऋण एक खर्ब ४४ अर्ब र हिमालयन बैंकको एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक खर्ब ८४ अर्ब र हिमालयनको एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।
पहिलो समूह हिमालयन शम्शेर राणाको थियो, दोस्रो भीमबहादुर पाँडे तथा पृथ्वीबहादुर पाँडे, तेस्रो मोहनगोपाल खेतान र चौथो नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा आनन्दभक्त राजभण्डारीको परिवारको स्वामित्वमा भएका कम्पनी, उनीहरुका आफन्त र मित्रहरुको नाममा सेयर थियो ।
यस हिसाबले आजको मितिमा नयाँ बैंकको निक्षेप ३ खर्ब १३ अर्ब र ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब पुग्ने छ । सबैभन्दा बढि निक्षेप र ऋण रहेको (निजी क्षेत्रको) बैंक एनआइसी एसिया बैंकको ऋण २ खर्ब ३ अर्ब छ । निक्षेप २ खर्ब ३१ अर्ब छ । मर्जरपछि यस हिसाबले एनआइसीभन्दा ८२ अर्ब निक्षेप र ४५ अर्ब ऋण बढी हुने छ, त्यो पनि एकदमै कम शाखा सञ्जालबाट ।
दुवै बैंकको राजधानीलगायत देशका विभिन्न शहरहरुमा थुप्रै जग्गा जमिन र आफ्नो भवन छ । कस्ट अफ फण्ड साढे ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने छ भने आधार दर सात प्रतिशत हाराहारी हुने छ । यसले गर्दा ब्यापार वृद्धि गर्न मर्जरपछि अझ सजिलो हुने देखिन्छ ।
भनिन्छ, हिमालयन बैंकको स्थापना नेपालका प्रथम गभर्नर हिमालयन शम्सेर राणाको पहलमा भएको हो । अहिले पनि हिमालयन शम्सेर राणा बैंकको सञ्चालक समितिको प्रमुख सल्लाहकारकारूपमा छन् । उनका छोरा अशोक राणा दुई दशकदेखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्, भन्दा फरक पर्दैन ।
हिमालयन बैंक स्थापना हुँदा उनीहरुका आफन्त र मित्रहरु गरेर चार वटा समूह बनाइएको थियो । यी चार समूहमा प्रत्येकसँग १२.७५ प्रतिशतका दरले ५१ प्रतिशत सेयर थियो । त्यसमध्ये पहिलो समूह हिमालयन शम्शेर राणाको थियो, दोस्रो भीमबहादुर पाँडे तथा पृथ्वीबहादुर पाँडे, तेस्रो मोहनगोपाल खेतान र चौथो नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा आनन्दभक्त राजभण्डारीको परिवारको स्वामित्वमा भएका कम्पनी, उनीहरुका आफन्त र मित्रहरुको नाममा सेयर थियो ।
अहिले शशिकान्त अग्रवालसँग केही शेयर छ । त्यसबाहेक मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका आफन्तको सेयर पनि यो कम्पनीमा छ । त्यसबाहेक पाँडेको क्लस्टरमध्ये शशिकान्त अग्रवालसँग आफ्नै नाममा २.६५ प्रतिशत, इन्दिरा मल्लसँग ०.१९ प्रतिशत, नयनतारा मास्केसँग ०.०२ प्रतिशत, मेनुका श्रेष्ठसँग ०.०१ प्रतिशत र स्याकार कम्पनीसँग ०.९९ प्रतिशत सेयर देखिन्छ ।
बैंकको ठूलो सेयर साझेदारमध्येको एक आभा इन्टेरनेशनल कम्पनी हिमालयन शम्सेर राणाको कम्पनी थियो, जुन कम्पनीसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि ११.३८ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ ।
तर आभा इन्टरनेशनल कम्पनीमा अहिले हिमालयन शम्शेर राणाको प्रभाव भने घट्दै गएको छ । आभामा भएको ठूलो सेयर शशिकान्त अग्रवालको हातमा पुगेको छ भने त्यही कम्पनीको केही हिस्सा एनसेलका स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको हातमा पुगेको देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
हिमालयन शम्शेर राणाको क्लस्टरअन्तर्गत उनका आफन्त र मित्रहरु शर्मा एण्ड कम्पनीसँग ०.६६ प्रतिशत, इन्टरनेशनल ट्रेड लिंकसँग ०.४७ प्रतिशत, इलु शर्मा धोबीचौरसँग ०.१३ प्रतिशत, नेत्र राज्यलक्ष्मीसँग ०.०६ प्रतिशत र विजयनारायण सिंहसँग ०.०५ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ । त्यसपछि संस्थापक भीमबहादुर पाँडे र पृथ्वीबहादुर पाँडेको परिवार, आफन्त र मित्रले खोलेर स्थापना गरेको कम्पनी छायाँ इन्टरनेशनलसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि ८.८९ प्रतिशत सेयर छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले शशिकान्त अग्रवालसँग केही शेयर छ । त्यसबाहेक मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका आफन्तको सेयर पनि यो कम्पनीमा छ । त्यसबाहेक पाँडेको क्लस्टरमध्ये शशिकान्त अग्रवालसँग आफ्नै नाममा २.६५ प्रतिशत, इन्दिरा मल्लसँग ०.१९ प्रतिशत, नयनतारा मास्केसँग ०.०२ प्रतिशत, मेनुका श्रेष्ठसँग ०.०१ प्रतिशत र स्याकार कम्पनीसँग ०.९९ प्रतिशत सेयर देखिन्छ । ५१ प्रतिशत सेयरबाहेक बाँकी ३४ प्रतिशत सेयर दुई वटा संस्थापक लगानीकर्तासँग छ । त्यसमध्ये एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १४ प्रतिशत सेयर छ भने अर्को २० प्रतिशत सेयर पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग छ । बाँकी १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग छ भन्दा फरक पर्दैन ।
हिमालयन बैंकमा जस्तो इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सीमित पारिवारिक लगानीकर्ताको दबदबा छैन् । तर यहाँ पनि पृथ्वीबहादुर पाँडेको प्रभाव भने बलियो छ । जति बेला पृथ्वीबहादुर पाण्डेले हिमालयन बैंकमा भएको आफ्नो सेयर बेचेर क्रेडिट एग्रिकोलसँग इन्डोस्वोज नेपाल (पछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नामामा बदलिएको) को सेयर खरिद गरे त्यतिबेलादेखि नै उनी बैंकमा प्रभावशाली छन् ।
नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दभक्त राजभण्डारी तथा उनका आफन्त र मित्रहरु मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी एन ट्रेडिङसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि १२.७१ प्रतिशत सेयर छ । यो कम्पनी अहिले मनोजबहादुर श्रेष्ठ र उनका भाई प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको स्वामित्वमा छ । त्यसबाहेक उनको क्लस्टरमा सुमन राजभण्डारीसँग ०.०४ प्रतिशत सेयर देखिन्छ ।
मोहनगोपाल खेतान तथा उनको परिवारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी म्युचुअल ट्रेडिङसँग हिमालयन बैंकमा अहिले पनि ११.८५ प्रतिशत सेयर छ । जुन कम्पनीमा प्रेमलता खेतान सेयरधनी भएपनि अहिले सिपी खेतान र पिपी खेतानले हेर्छन् । त्यसबाहेक उनको क्लस्टरबाट हिमालयन बैंकमा मारवाडी सेवा समितिको ०.१३ प्रतिशत सेयर र अन्जु खेतानको नाममा ०.७७ प्रतिशत सेयर छ । यो ५१ प्रतिशत सेयरबाहेक बाँकी ३४ प्रतिशत सेयर दुई वटा संस्थापक लगानीकर्तासँग छ । त्यसमध्ये एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १४ प्रतिशत सेयर छ भने अर्को २० प्रतिशत सेयर पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग छ । बाँकी १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग छ भन्दा फरक पर्दैन ।
शशिकान्त अग्रवालपछि सांघाई परिवार, टिवडेवाला, पञ्चकन्या र मर्कन्टाइल इन्भेष्टमेन्ट लगायतको पनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा राम्रै सेयर लगानी छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो ।
हिमालयन बैंकमा रहँदा पृथ्वी बहादुर पाँडेले छायाँ इन्टरनेशनल कम्पनीमार्फत सेयर लगानी गरेका थिए भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा उनले छायाँ इन्भेष्टमेन्ट प्रालि खडा गरेर लगानी गरेका थिए । बैंकमा छायाँको ६.६५ प्रतिशत सेयर छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका छायाँ जस्तै २३ वटा कम्पनीको कुल ५७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । पाँडेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि शशिकान्त अग्रवाल प्रभावशाली सेयरधनी हुन् । उनले आधा दर्जन कम्पनीमार्फत १० प्रतिशतभन्दा माथि सेयर छ भन्दा फरक पर्दैन ।
शशिकान्त अग्रवालपछि सांघाई परिवार, टिवडेवाला, पञ्चकन्या र मर्कन्टाइल इन्भेष्टमेन्ट लगायतको पनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा राम्रै सेयर लगानी छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हो । यो कम्पनीसँग १२.१५ प्रतिशत सेयर छ भने राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग १.१४ प्रतिशत र नागारिक लगानी कोषसँग २.६३ प्रतिशत सेयर छ । यसबाहेक बैंकमा सर्वसाधरण सेयरधनीको ३१ प्रतिशत सेयर छ भन्दा फरक पर्दैन ।
पारिवारिक सम्बन्ध र मिल्दो जुल्दो शेयरधनी भएकै कारण केही महिना भित्रै यी दुई बीच मर्जर भए अचम्म मान्नु पर्दैन । यि दुई बैंक मर्ज भए पुँजीमा ठूलो, बैंक कर्जामा ठूलो बैंक र डिपोजिटमा पनि ठूलो बैंक बने पनि शाखा सञ्जालमा चाहि केही सानो नै बन्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चर्को दबाब र पारिवारिक सम्बन्ध मिल्दो जुल्दा प्रमोटर शेयरधनीहरुको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा प्रमोटर शेयर छ । यसकारण पनि अव यी दुई बैंक मर्जर हुने विषयमा दुई मत देखिदैन । सचेत भया । (राजतिलक साप्ताहिकबाट साभार गरिएको)
माछापुच्छ्रे बैंकले लाभांश वितरण गर्ने
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र भएका र उद्दार गर्नैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको सूची तयार..?